McKnight Names Neeraj Mehta oo ah Agaasimaha Waxbarashada
Machadka McKnight Foundation ayaa magacaabay Neeraj Mehta maadaama uu yahay agaasimaha barashada, meel cusub oo sii xoojin doonta ballanqaadkayaga barnaamijka ballaaran ee lagu kobcinayo dhaq-dhaqameed isku-dhafan oo ku saabsan barashada joogtada ah iyo inaynu u horseedno shaqadeenna si aan u noqdo mid la aqbali karo, leh, iyo waxtar leh. Wuxuu bilaabi doonaa July 16.
"Waxaan ku faraxsanahay Neeraj inuu nagu soo biiri doono maareeyaheena cusub ee waxbarashada," ayuu yiri madaxweyne Kate Wolford. "Wuxuu yahay hoggaamiye bulsho oo aad loo tixgeliyo, isku xiraha, iyo xayiraadaha oo muujiyay awoodda loo isticmaalo barashada casriga ah iyo xirfadaha waxqabadka ee loo siman yahay si loo dejiyo qorsheynta, istaraatiijiyada, iyo saameynta."
Neeraj waxay ku jirtay labaatankii sanno ee la soo dhaafay in ay ka shaqeeyaan sidii loo hormarin lahaa caddaaladda, bulshada, iyo dhaqaalaha ee xaafadaha iyo beelaha ku yaal aagga Minneapolis-St.Paul. Waxaa loo tababaray sidii injineer madani ah, wuxuu si deg deg ah ugu tiirsanaa dhismaha beesha iyo horumarka ka dib markii uu wajahayo xaqiiqooyinka sinnaanta iyo dhaqaalaha ee gobolka. Tan iyo 2012, wuxuu u adeegay agaasimaha barnaamijyada bulshada ee Xarunta Magaalooyinka iyo Gobolada (CURA) ee Jaamacadda Minnesota, halkaas oo uu adeegsanayo cilmi-baaris si uu u caawiyo ururrada horumarinta ajandaha barashada bartilmaameedka isla markaana la qabsado shaqadooda ku salaysan waxa ay bartaan. Waxa kale oo uu ka shaqeeyaa macalimiin ku habboon Dugsiga Humphrey, halkaas oo uu baro koorasyada diirada saara dib u noolaanshaha xaafadda. Ka hor doorkiisa CURA, Neeraj wuxuu ka shaqeeyey Nexus Community Partners, halkaas oo uu ka caawiyay hoggaanka ballaarinta shaqadooda North Minneapolis.
Neeraj wuxuu haystaa shahaadada bachelorka ee mihnadda madaniga ah ee Jaamacadda Minnesota iyo shahaadada masterka ee siyaasadda dadweynaha ee Jaamacadda Minnesota ee Hubert H. Humphrey School of Public Affairs. Waxaa la guddoonsiiyey "Bush Foundation Leadership Fellowship 2011". Neeraj wuxuu xoojinayaa sidii loo dhisi lahaa beelaha xooggan, caafimaad iyo bulshadaba meel walba, gaar ahaan North Minneapolis, halkaas oo uu ku nool yahay xaaskiisa iyo laba wiil. Wuxuu ku jiraa guddiga Farshaxanada Dhaqanka iyo Xarunta Dhaqaalaha ee cusub ee la sameeyey.
Machadka McKnight Foundation, oo saldhig u ah qoysaska Minnesota, waxay raadineysaa inay kor u qaadaan tayada nolosha ee jiilalka hadda iyo mustaqbalka. Fikradaha barnaamijka waxaa ka mid ah horumarinta dhaqaalaha gobolka iyo horumarinta bulshada, farshaxanka Minnesota iyo farshaxanada, sinnaanta waxbarashada, ka qayb qaadashada dhalinyarada, cimilada iyo tamarta Midwest, Darajada biyaha ee Mississippi, cilmi baarista xayawaanka, cilmi baarista dalagga caalamiga ah iyo hab-nololeedka miyiga. Waxaa la aasaasay sannadkii 1953, waxaana si madax-bannaan u maamula William iyo Maude McKnight, Hantidhawrku wuxuu leeyahay hanti ku dhow qiyaastii $ 2.3 bilyan waxayna bixisaa $ 90 milyan sannadkii.